Global ARCH IiWebhu - Global ARCH
Global ARCH / Funda nzulu / Global ARCH webinar
NgoMeyi 6 ngo-8-9 am EST: Global ARCH IQonga leeNkokheli
Ezi ntlanganiso zithuba lokuba wabelane ngolwazi malunga nombutho wakho kunye nemisebenzi yawo, kwaye ufunde omnye komnye kwindawo enobubele nenkxaso. Ziya kubanjwa ngoLwesihlanu wokuqala wenyanga nganye ngo-8-9 am EST (ngaphandle kokuba ithunyelwe). Ividiyo okanye umnxeba osimahla weaudio uyafumaneka kumazwe amaninzi. Sijonge ukukubona (okanye ukukuva)!
IHLEHLISIWE KANYE: TBA
Ukuphila ngeRheumatic Heart Disease
Yintoni i-RHD kwaye abantu abanokuxilongwa banokuphila njani ubomi obunempilo? Ukuphila ne-RHD kunokuyinciphisa imisebenzi kabani yemihla ngemihla kodwa oko akuthethi kuthi isiphelo sokuphila ngamaphupha kabani. Layisha ukuze uve EUganda UFlavia Kamalembo Batureine kunye neNamibia Lavinia Ndemutila Ndinangoye, izigulane ezimbini ze-RHD kunye nabameli bezigulane ezisebenzayo, babelane ngamabali abo. Funda malunga ne-RHD kunye nendlela yokuphila nayo, kwaye ufumane impembelelo yokusukela amaphupha akho. Nceda ubhalise.
NgoSeptemba 24 ngo-8-9 e-EST: Global ARCH Live
I-CHD kunye ne-RHD: Ukucwangcisela impilo yexesha elide
“Ngaba umntwana wam uza kuphila ubomi obuqhelekileyo?” “Ndingamfumana umntwana?” Le yeminye yemibuzo ethi isifo senhliziyo esizalwa kunye nesifo senhliziyo samathambo iinkokeli zibuzwa zizigulane kunye neentsapho. Joyina Global ARCH UMongameli Amy Verstappen nanjengoko enikezela ngezixhobo eziphambili kunye nolwazi, kubandakanya ukufikelela kwizikhokelo ezipapashiweyo, ukuze iinkokheli zikwazi ukunceda amalungu abo oluntu acwangcise impilo yexesha elide.
Meyi 8 ngo-7: 30-8: 30 am EST - Njani: Sebenzisa uMthwalo woLwazi lweSifo seLizwe ukuXhobisa ngokuBhengeza kwakho
Idatha yezempilo ibalulekile kubhengezo lwezempilo. Ukunxibelelana nabaqulunqi bemigaqo-nkqubo kuqala ngokuchaza “umthwalo wezifo” kwindawo yabo, njengokufa nokukhubazeka. I-Global Burden of Disease Study database iqulethe ngokubanzi ilizwe elithile isifo senhliziyo esizalwa kunye nesifo senhliziyo samathambo idatha yezempilo. Le webinar iya kubonisa indlela yokufikelela kunye nokusebenzisa le datha ukuqinisa ulwazi lwakho kunye nemigudu yokukhuthaza.
imodareyitha: UBistra Zheleva, VP weSicwangciso seHlabathi kunye nokuLwela, i-HeartLink yaBantwana
Ummeli: UDomininique Vervoort, MD, isikolo sikaJohn Hopkins Bloomberg seMpilo kaRhulumente
Nge-12 kaFebruwari ngo-8-9 e-EST-UkuBhengeza ngokuSebenza: Ukukhuthaza izifo zeNtliziyo eziQhelekileyo kubantwana kwinqanaba lesizwe
Global ARCH Amalungu ebhodi u-Bistra Zheleva, i-VP yeQhinga leHlabathi kunye ne-Advocacy kwi-Children's HeartLink kunye no-Ruth Ngwaro, umseki-mbumba we-Kenya Mended Hearts Patients Association bayakuxoxa ngamabali abo empumelelo. I-Mended Hearts Kenya iphumelele ekwenzeni urhulumente ahlawulele utyando lwe-CHD, kunye ne-Children's HeartLink ekwandiseni ukuhlolwa kunye notyando eKerala, e-India.
Nge-27 kaNovemba nge-8 kusasa nge-EST: Itekhnoloji kunye nendlela yokufumana izaphulelo kumbutho wakho
UFarhan Ahmad, uMseki kunye ne-CEO yamavolontiya eSiseko seNtliziyo yaBantwana ePakistan, kunye nelungu lebhodi Global ARCH, Siza kuxoxa ngezinto ezikhethiweyo zesoftware ezingenzi nzuzo kunye nendlela onokuzifumana ngesaphulelo. Izihloko zibandakanya:
Zeziphi iinkampani zesoftware ezibonelela ngoncedo
Yimalini isisa onokuyigcina ngokufanelekileyo usebenzisa isoftware yasimahla
Uvavanyo lwasimahla lunokunceda njani ekukhuliseni inkqubo
Izicelo ezibalulekileyo ezinokuzenzekelayo imisebenzi yesiqhelo
NgoLwesihlanu, nge-17 kaJulayi nge-8-9 e-EST: Ukuhambisa iMithombo yeendaba yoLuntu kwinqanaba eliPhakamileyo kunye nokuBhengeza kwabaguli
U-Dominique Vervoort, MD, ugqirha kunye nomnqweno wokunyanga ugqirha wentliziyo ngemvelaphi yotyando lwehlabathi, kunye nemithombo yeendaba ezentlalo, iya kuxoxa ngokusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo kutshintsho lwezopolitiko kunye nengca.
NgoLwesibini, nge-23 kaJuni nge-8-9 e-EST: i-RHD, i-CHD kunye ne-COVID-19: uHlaziyo lweHlabathi
Joyina uNjingalwazi uLIesl Zuhlke, uMlawuli weCandelo loPhando ngezifo zaBantwana kwiDyunivesithi yaseKapa, ​​njengoko ethetha ngento esiyaziyo, esingayaziyo, kwaye sinethemba lokwazi kungekudala malunga nefuthe le-COVID-19 kwintliziyo yokuzalwa kunye ne-rheumatic heart abaguli kwihlabathi liphela.
NgoLwesihlanu, nge-29 kaMeyi ngo-8-9 e-EST: Isibhengezo samaLungelo, kunye nokubaluleka kokukhuthaza abaguli. UAmy Verstappen, MGH, Global ARCH UMongameli, uzakuthetha malunga nendlela ngeli xesha likaCovid-19 abemi bethu abasesichengeni ngakumbi, kunye nesidingo seSibhengezo samaLungelo ngaBantu abaChaphazeleka sisifo sentliziyo sabantwana asikaze sibe sikhulu. Sijoyine ukuze ufunde ngendlela onokuthi wenze ngayo ifuthe.
NgoLwesihlanu, nge-15 kaMeyi ngo-8-9 e-EST: Izicwangciso-qhinga zokunyusa ingxowa-mali ngexesha loBhubhane: Isikhokelo kumaqela abaguli abanesifo sentliziyo
UBistra Zheleva, Usekela-Mongameli weSicwangciso-qhinga seHlabathi kunye nokuBhengeza kwi-HeartLink yaBantwana, unikezela ngemiceli mngeni yokufumana imali kunye namathuba, elandelwa lithuba leengxoxo kunye nokwabelana ngesicwangciso. Ujoyine u-Amy Basken woyisa i-CHD (i-US), uBlanca del Valle kunye ne-Kardias (Mexico), kunye no-Farhan Ahmad kunye ne-Pakistan Children's Heart Foundation-zonke izibonelelo eziphumelele kakhulu.
NgoLwesihlanu, nge-1 kaMeyi ngo-8-9 e-EST: I-CHD kunye ne-COVID-19-Yintoni esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku?
I-Disty Pearson, i-PA-C kwiziko leentliziyo laseBoston eliDala kunye Global ARCH Usekela-Mongameli, uya kunika isishwankathelo esifutshane solwazi olukhoyo ukuza kuthi ga ngoku, alandelwe ngu-Q no-A kunye nengxoxo.